🥇 ▷ Qiimaha iyo faahfaahinta Redmi Note 8 iyo note 8 Pro ✅
Qiimaha iyo faahfaahinta Redmi Note 8 iyo note 8 Pro
Redmi note 8 iyo note 8 Pro ayaa lagu shaacin doonaa Shiinaha Ogosto 29-keeda, laakiin waxyaabaha la cayimay iyo qiimaha alaabooyinka cusub ee soo socda ayaa durba la ogaa.
91mobiles ayaa daabacay miis soo bandhigaya qiimaha taleefanka casriga ah. Qiimaha nooca aasaasiga ah ee Redmi Note 8 wuxuu noqon doonaa $ 140, iyo note 8 Pro wuxuu ku kacayaa $ 251.
Shabakadda bulshada ee Shiinaha Weibo waxay leedahay miis leh dhammaan astaamaha Redmi Note 8 Pro. Sidaa darteed, sheekada cusub ee soo socota waxay yeelan doontaa muuqaal 6.53-inji ah oo leh xallin 2340 × 1080 pixels ah iyo galaas difaaca galaaska shanaad ah ee Gorrilla Glass. Shaashadda waxay heli doontaa shahaadada TUV Rheinland, iyo sidoo kale ka ilaalinta qeybta buluugga ah ee nalka iftiinka. Ka sokow taasi, Redmi note 8 Pro wuxuu ku qalabaysan yahay ilaalinta IP52. Sidoo kale, taleefanka gacantu wuxuu u adkeysan doonaa dhicitaanka dhirirka ah 1.5 m.
Waxqabadka gadget wuxuu siin doonaa MediaTek Helio G90T tandem iyadoo leh 6/8 GB oo RAM ah. Xaddiga xasuusta gudaha waa 64/128 GB, iyadoo ay suuragal tahay in la ballaariyo microSD-kaararka. Awooda baterigu waa 4500 mAh. Sidoo kale waxaa lagu dhawaaqay taageeridda ku dallaca deg-degga ah ee Cilmiga Degdegga ah ee 4+ iyo 18-watt ku amraya dallaca wireless.
Kaameradda ugu weyn oo leh afar qaybood oo ah 64 megapixels (f / 1.7) + 8 megapixels + 2 megapixels + 2 megapixels iyo kamarad 20 megapixel selfie ah ayaa mas’uul ka noqon doonta sawirka iyo toogashada fiidiyaha. Waxaa sidoo kale mudan in xusid mudan jiritaanka qof cod dheer leh oo leh nambarka codka NXP Smart PA, mashiinka maqalka 3.5 mm, mashiinka NFC, deked isgaarsiinta iyo mikarafoonka faraha ee qeybta dambe. Software-ka la adeegsado waa MIUI 10 oo ku saleysan Android 9 Pie. Cabbirrada qalabka ayaa ah 161.3 × 76.4 × 8.8 mm, culeys – 199 garaam.